रातु खोलामा राजनितिक दलले क्रसर डन पोसेका छन् ः नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राजु खड्का, हेर्नुस् भिडियो - Mahottari Post
रातु खोलामा राजनितिक दलले क्रसर डन पोसेका छन् ः नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राजु खड्का, हेर्नुस् भिडियो
८ फाल्गुन २०७५, बुधबार १६:५२
प्रदेश २ मा चुरेको दोहन ह्वतै बढेको छ । अवैध दोहनले चुरेभावर संकटमा परेको छ । अवैध दोहनले महोत्तरी, धनुषा, सिरहा लगायत तराइ—मधेशका भावर क्षेत्र कुरुप बनेको छ ।
चुरे विनासले जल, जमिन, जंगल,जीवजन्तु, जनताहरुको जीव संकटमा परेको छ । चुरेभावर क्षेत्र खनेर कति करोंडपति भए । प्रकृति दोहन गरेर कतिले राजनिति हैसियत बनाए । चुनावमा चुरे संरक्षणको नारा घन्काएर जितेर मन्त्री पद पड्काए । राजनितिक दल र नेताहरुको संरक्षणमै चुरे क्षेत्र वरिपरी क्रसर डनहरुको बिगबिगी छ ।
चुरेमा मापदण्ड विपरित क्रसरहरु संचालनमा छन् । दशक अघिदेखी ती क्रसरहरुले निर्वाध उत्खनन गर्दै आएका छन् ।अबैधानिक क्रसरलाई न कानुनले छोएको छ न त प्रहरी —प्रशासनको आँखाले देखेको छ । झन् राजनिति दलहरुले त पोसेर राखेका छन् । राजनिति छत्रछाँयामा क्रसरवलाहरुको चुरे कब्जा गरेका छन् ।
श्रोतका अनुसार, महोत्तरीमा कम्तिमा चार दर्जन क्रसर उद्योग छन् । ती मध्य अधिकांस अवैध छन् । धनुषामा १३ वटा क्रसर उद्योग मध्य ८ वटा उद्योगलाई प्रशासनले गैरकानुनी ठहर गरिसकेको छ । कारवाही हुन सकेको छैन ।
सिरहमा १७ वटा मध्य १० क्रसर उद्योग अवैध रुपमा सञ्चालनमा छन् । क्रसरको कच्चा पदार्थ चुरैमै पर्दछ ।मापदण्ड विपरित संचालित क्रसर उद्योगले चुरेभारलाई उत्खनन गरेर बर्वाद बनाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले एक सातअघि नै जिल्लाभरीका क्रसर उद्योग बन्द गराइसकेका छन् । १२ वटा क्रसरलाई बन्द गर्न स्थलगत अनुगमन गरेर पत्रपनि दिइसकेका छन् । तर, क्रसर भने चलिरहेकै छ ।
रातु खोला र नदी उकास जग्गालाई क्रसर संचालकहरुले गैरकानुनी उत्खनन गरेर बर्बाद बनाएको छ । रातु खोला र बगरको अवैध उत्खनन गर्ने क्रसर संचालकहरुलाई कसले पोसेर राखेका छन्, उनीहरुमाथि किन कारवाही हुदैंन यिनै बिषयमा केन्द्रीत रहे युवा पत्रकार तथा समाजिक अभियन्ता राजकरण महतोले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राजु खड्कासंग गरेको अन्तर्वाताको अंश प्रस्तुत छ ः
(१) चुरे संरक्षणको सवालमा तपाइको पार्टीको स्पष्ट धारणा के हो ?
—हाम्रो पार्टीको धारणा अहिले मुल त चुरे बचाउ अभियान नै हो । मधेशको सन्दर्भमा चुरे संरक्षण नगर्ने हो भने मधेशको उत्पादनयुक्त जमिनहरु मरभूमिमा रुपान्तरण हुन्छन् ।
रातु खोला लगायतको अन्य खोलाहरुबाट जुन किसिमले बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी अवैधानिक ढंगले र वातावरण परिक्षण मुल्याङ्कनको जुन अधारभूत मुल्यमान्यतालाई पनि ध्यान दिइएको छैन । उत्खननलाई वैज्ञानिक ढंगले अनुसन्धान गरेर के गर्दा खेरी राम्रो हुन्छ, गिटी बालुवा कति घनमिटर सम्म एक दिनमा निकाल्दा वा एक वर्षमा निकाल्दा प्रकृतिलाई प्रभाव पार्दैन । त्यो बिषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र खोलाबाट गिटी बालुवा निकाल्ने ठाउँमा पुग्नु पर्ने हो । तर, अहिले रातु खोलाको जुन किसिमले सवाल उठेको छ,अनियन्त्रित ढंगले बिक्री बितरण गरिएको छ । यो के भएको हो भन्ने बिषयमा हामी नै अन्यौलमा छौं ।
(२)अब के गर्नु हुन्छ, रातु खोला उत्खननको बिषयमा कतिको गम्भिर हुनुहुन्छ ?
—बास्तवमा हामी रातु खोलाको जुन ढंगले दोहोन भइरहेको छ । यसप्रति हामी गम्भिर छौं । बर्दिबास नगरपालिका र पारिपट्टी धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको सीमा भित्र रातु खोला पर्छ । यो दुवै नगरपालिकाको निम्ति रातु खोलाको ढुङ्गा, बालुवा र गिटी यहीको सम्पती हो । हाम्रोे हिरा मोती हो । यसलाई हामीले नै संरक्षण गर्नुपर्छ ।
बर्दिबास नगरपालिकामा कति घनमिटर ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीहरु छन् । जुन यहाँ बाटोघाटो निर्माण गर्न आवश्यक छ ,त्यो बिषयमा छलफल छैन । अहिलै नै खनेर सबै सकिदिने त ? बर्दिबास नगरपालिकाबासीले प्रयोग गर्दा कति ट्याक्स लिने बाहिर लादा या अरु जिल्लामा लादा कति ट्याक्स लिने यो बिषयमा कुनै ठोस माफदण्ड नबनाइकन जसले जति पायो त्यति उत्खनन गरिदैंछ । यो ठिक छैन् ।
(३) तपाईहरु त चुनाव ताका रातु खोलाको उत्खन्न रोक्छु,यसलाई कानुन सम्वत बनाउछु भन्ने मुदा लिएर अगाडी बढनु भएको थियो तर अहिले के भयो ?
—त्यो एकदम सत्य हो, त्यो हो नै यसलाई रोक्नुपर्छ हाम्रा प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ जो जित्नु भएको छ । बर्दिबास नगरपलिकामा पुर्व माओवादी र नेकपा एमालेले जितेको छ । नगरमा बहुमतले जितेको छ । मेयर उपमेयर जितेको छ ,जनप्रतिनिधीले प्रभावकारी ढंगले काम किन गरि राख्नु भएको छैन, हिजो घोषणा पत्रमा आएको कुरा सत्य हो । तर हाम्रो जनप्रतिनिधीहरु किन रातु खोलाको बिषयमा उदासिन हुनुहुन्छ । जनताको तहबाट विभिन्न कुराहरु जोडिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि जोडेर बिषय बस्तुहरु उठेका छन् ।
(४) जनतासंग भोट लिएर तत्कालिन माओवादीले रातु खोला र बगर दोहन विरुद्ध मौन बसेर चोट दिइरहको भन्दै छन् जनताहरु ?
—चुनाव भन्दा पहिले रातु खोला र त्यस वरिपरीे गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा र क्रसरको गतिविधी कम थियो । रोक्छु भन्ने ठाँउमा निर्वाचन पछि बढ्यो । वास्तवमा जित्नु भन्दा पहिला कम थियो जितेपछि कसरी बढयो ? र जित्नु भन्दा पहिला कति घन मिटर गिट्टी, बालुवा ओसारियो र जिते पछि कति ओसारियो ? रातु खोला कसरी ठेक्का लगाएको छ ? यो सबै बिषयमा हाम्रो पार्टीको ध्यानर्षण भएको छ । त्यो कति सत्य हो , कति असत्य हो हामी छानविन गर्नेवाला नै छौ । तर उहाँहरुको वास्तविक भने उदासिन्ता देखिन्छ । हाम्रो पार्टीले तुरुन्तै एउटा छानविन गरेर वास्तविक तथ्यसत्य के हो भन्ने कुराहरु पत्ता लगाएर हामी रातु खोलाको बिषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको अवैज्ञानिक उत्खननलाई नियन्त्रण गर्ने र पछि आएर पुरै चुरेपहाडलाई संरक्षण गर्ने हाम्रो पार्टीको दष्टिकोण प्रष्ट छन् ।
(५)राजनितिक दलहरुले नै अवैध क्रसर चलाउने डनहरुलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ नी ? नत्र जिल्ला समन्वय समितिले बन्द गराएको क्रसरहरु पनि किन संचालनमै छन् ?
—राजनितिक दलले क्रसर डन नपालेको कसरी नभन्ने , नपालेको भए उनीहरु नियन्त्रित हुनुपर्ने, अब कुन दलको कति सहभागीता छ । त्यो चाही हामीले छानविन गर्नैपर्छ । अहिलेसम्म नकारात्मक गतिविधी र गलत क्रियाकलाप गर्ने मान्छेलाई संरक्षण दिने काम राजनितिक दलबाट भएकै छ । यहाँको सरकार नेकपाको हुने, प्रदेशमा चाँही मधेशवादीहरुको सरकार छ । प्रदेश सरकारको प्रतिपक्षमा मजबुत सहित नेकपा बसेको छ । बर्दिबास नगरपालिका वडा देखि मेयर उपमेयर नेकपाले जितेको छ । अब यहाँ अदृश्य शक्ति अरु कुनैले चलाएको छ भन्ने कुरा चाही भ्रामक कुरा हो ।
(६) क्रसर डन दुई तिहाइका अघि कसरी टिकेका छन् ?
—यहाँ कुनै नकुनै सम्बन्धले, कुनै न कुनै जितेका जनप्रतिनिधीको सहभागिताले, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसंग क्रसरवलाहरुको सम्बन्ध रहन्छ नै । जितेका जनप्रतिनिधि र जितेका राजनितिक दलहरुको जो सरकार छ त्यो भन्दा बाहिरपट्टी रहेर क्रसर डनहरु टिक्नेवाला छैन । राजनितिक पार्टीले ती गलत कृयाकलाप गर्ने डनहरुलाई, प्रकृतिक स्रोतसाधन दोहन गर्ने डनहरुलाई संरक्षण गर्ने काम राजनितिक दल नै गरिहेको छ । अब हाम्रो पार्टीका जनप्रतिनिधी ,स्थानिय तहका सरकार या कुनै न कुने रुपका जनप्रतिनिधिले डनको कति संरक्षण गर्ने गरेका छन् या गरेका छैनन् । बाहिर के छ र भित्र के छ यो तथ्यसत्य बुझेर भन्न सकिन्छ । यदी हाम्रो पार्टीका नेताहरु वा जनप्रतिनिधिहरु जोडिएको प्रमाणित भयो र अवैधानिक रुपमा रातु खोलाको वालुवा गिट्टी उत्खनन र ओसारपसारका काममा सहभागि भएको प्रमाणि भयो ती जनप्रतिनिधिहरुलाई हाम्रो पार्टीले छोड्न चाही छोड्दैन है ।
गाउँदेखी सदनसम्म रातु खोलाको दोहोनको सवाल ः जाँचबुझ गर्न न्यायिक समिति गठन गर
प्रतिनिधि सभामा रातु खोलाको अवैध उत्खननको जाँचबुझ गर्न न्यायिक समिति गठनको माग उठेको छ । सांसद इन्दु शर्माले चुरे दोहनले मधेश मरुभूमी बनाउने काम भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानार्षण गराएका छन् ।
‘विगत १० बर्षदेखि महोत्तरीको रातु खोलाबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको व्यापक तस्करी भइरहको छ,’ संघीय सदनमा बोल्दै सांसल शर्माले भनिन्,‘हालको वर्षहरुमा देशमा विकासका काम तिब्र भएदेखि तस्करहरुले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खन्न गर्ने, ऐन कानुन विपरित रातु खोलाको पुल र गाउँ बस्ति नजिकबाट माफदण्ड विपरित गैरकानुन तरिकाले ठुला – ठुला डोजर र टिपर प्रयोग गरी १० फिट देखि १२ फिट सम्म खाल्टो बनाई रातु खोलाको चरम दोहन गरेका छन् ।’ दैनिक सैकडौ टिपर र ट्याक्टरले रात भरी उत्खन्न गरेर नदीजन्य समाग्रीको तस्करी भइरहको बताइन् । सबै स्थानिय निकाय र राष्ट्रिय मिडियाहरुले पनि रातु खोलाको दोहन बारेमा सर्वजानिक गरिपनि रोकिएको छैन ।
‘यसरी राष्ट्रिय सम्पतीको ब्रह्मलुट भइरहंदा स्थानिय सरकार, सुरक्षा निकाय र बर्दिबासमै कार्यालय खोलेर बसिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के हेरेर बसेका छन् ,’सांसद शर्माले प्रश्न गर्दैै भनिन्,‘यसरी दिनुहँु रातु खोलाको दोहनले मधेशको भविष्य संग जोडिएकोे चुरे क्षेत्रलाई पनि ठूलो असर परिहेको छ ।’ राष्ट्रिय सम्पतीको दोहन गर्ने माथि छानविन गरी कडा कार्वाही गर्नको लागि न्यायिक छानविन समिति गठनका लागि उनले सरकारको ध्यानार्षण गराएकी छिन् ।